INDLELA YOKUTHATHA IMVULA EMIFUTSHANE - UKUPHILA
Londoloza oovimba kunye nemali: ungayithatha njani imvula emifutshane
Ngokwe- Isebe lokugcina iYunivesithi yaseBoston , ishawa ephakathi isebenzisa malunga ne-5 yeelitha zamanzi ngomzuzu. Oko kuthetha ukuba uyayenza mfutshane ishawa yakho ngemizuzu emi-2 kuphela ngosuku, unokuwanciphisa amanzi Iilitha ezili-10 ngexesha. Yongeza ngokwenyani – ineempembelelo ezinkulu kwisipaji sakho nakwindalo esingqongileyo.
Nokuba yeyiphi na injongo yakho- ukuthoba ityala lakho okanye ukusebenzisa kwakho amanzi jikelele – ngumceli mngeni ukuzama ukunciphisa ixesha lakho kwishawari. Nazi iingcebiso ezimbalwa eziluncedo, iimveliso kunye nemibono enokukunceda uzise isicwangciso sakho sokugcina amanzi kancinci kufutshane nenyani.
1. Ixesha Iishawari Zakho
Oku kunokuba lula njengokusetha ialam kwifowuni yakho kangangemizuzu emihlanu okanye elishumi ukwazisa ukuba lixesha lokushiya ishawa. Kodwa ukuba ufuna i-cue ebonakalayo, zama Shower Coach , i-hourglass timer oyithatha kwisitya sokugcina ixesha lakho phantsi kwemizuzu emihlanu.
Ukuba into emfutshane yokuhlamba ithatha ukuqheleka, akukho monakalo ekulumiseni ukuzilungisa. Qala ngesibali-xesha kangangemizuzu engama-20 (okanye nantoni na ebonakala ngathi inokwenzeka) emva koko usebenze usiya kwinjongo yakho yasekhaya.
2. Yenza uluhlu lokudlala lweShower
Ukuba ixesha lakho lokuhlambela linemizuzu elishumi, yenza uluhlu lokudlala olude kangako (iingoma ezi-4 okanye njalo) kwaye umamele eshawa. Xa kufika ingoma yokugqibela, uya kwazi ukuba lixesha lokuba uhlambe uze uphume.
3. Thatha iMisebenzi ethile kwiShower
Ukucheba, ukuhlamba ubuso kunye nokuxubha amazinyo konke kungenzeka ngaphandle kweshawa. Yise esinkini-cima amanzi xa ingasetyenziswa – kwaye uya kulinciphisa ixesha lokuhlamba kwangoko.
4. Funda ukuthatha imikhosi yasemanzini
Iishawa zomkhosi waselwandle zisebenza ngokufanelekileyo ngokusetyenziswa kwamanzi. Kwiinqanawa zolwandle, amanzi amatsha anqunyelwe, ke oomatiloshe baqala ukusebenzisa le fomula yobhedu yokukhuhla yonke imihla: Vulela amanzi imizuzwana engama-30 ukuze ubemanzi, uwavale kwi-shampoo kunye ne-lather, emva koko ubuyisele amanzi kwaye hlamba ungene phantsi komzuzu.
Nawaphi na amanye amacebiso ongathanda ukwabelana ngawo?
Indlela yokuphila UMlawuli
UTaryn ngumntu wasekhaya waseAtlanta. Ubhala malunga nokucoca kunye nokuphila kakuhle njengoMlawuli weNdlela yokuPhila kwiTherapy Therapy. Usenokukunceda ukuba uchithe indlu yakho ngomlingo wencwadana yeendaba ye-imeyile. Okanye mhlawumbi uyamazi kwi-Pickle Factory Loft kwi-Instagram.
Indlu yensimbi iMagnolias yindawo yokulala nesidlo sakusasa-kwaye unokuhlala apho
Ungazihombisa njani iiNdonga ezingenanto kwiXabiso eliphantsi
Ngaba Singazicela Izipho ukuba siNomtshato wokuNdwendwela? Okanye Ngaba Yincinci Ngokwenene? Okanye u-Eloping?
Iindlela ezili-10 ezilula (kodwa eziPholileyo) kwiindlela zokuChwetheza iTheyibhile yakho yokutya, ngokuya nabaYili
oko u-1111 kuthetha ngokomoya
Ithetha ntoni i-1111 kumanani eengelosi
Ithetha ntoni i-1234 kumanani eengelosi